Tun Tun's Photo Diary: October 2016
How to edit Sunset Photo in Adobe Camera Raw & Photoshop?
at 10/15/2016 01:10:00 AM Links to this post No comments:
2D1N Solo Trip to Victoria, BC Canada [Video]
ကျွန်တော် ၂၀၁၅၊ စက်တင်ဘာ ကတည်းက ကနေဒါ နိုင်ငံကို ပြောင်းလာတာ အခုဆို ၁နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒါပမေယ့် ဘလော့က ပို.စ်တွေကို အစဉ်လိုက်ရေးနေလို. အခုမှ ၂၀၁၃ က ဓါတ်ပုံတွေ တင်နေတုန်းရှိပါသေးတယ်။ ဒါလေးက တော့ ကြားဖြတ် ဗွီဒီယို ပို.စ်ပါ။ ကျွန်တော် Youtube Channel ကိုလဲ Subscribe လုပ်ပေးကြပါဦး။ နောက် Video တွေ မှန်မှန်တင်ပါ့မယ်။း)
at 10/07/2016 10:20:00 PM Links to this post No comments:
ကျွန်တော့ Youtube Channel မှာ Photo Editing Tutorial တွေကို တင်ပါ့မယ်။ အဓိက Photoshop နဲ. Lightroom ကနေ Edit လုပ်နည်းတွေကို Share သွားပါမယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း Professional မဟုတ်သေးပေမည့် သိသလောက် Share ချင်တဲ့သဘောပါ။ စာဖက်သူတွေထဲက ဓါတ်ပုံရိုက်တာနဲ. ပတ်သက်ပြီး သိချင်တာတွေ လဲ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ Comment ထဲမှာ မေးခွန်းတွေမေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး စာဖက်သူတွေရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို လည်း ဝေဖန် သုံးသပ်၊ အကြံပြုစေချင်တယ် ဆိုရင် tuntunphotodiary@gmail.com ကို ပို.ပေးလို.ရပါတယ်။ ပို.ပေးတဲ့ ပုံတွေကို စုပြီး ၊ နောက် Video Tutorial မှ မျှဝေပေးသွားပါ့မယ်။
at 10/05/2016 10:33:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Lightroom, Tutorial, Video
2013-Dec-15, ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်က အပြန် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် နားကပဲ Top Choice လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထင်တယ်၊ အဲ့မှာ မုန်.၀င်စားခဲ့တယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က တော်တော်လေးကို စုံပါတယ်။ ပုံမှန် လက်ဖက်ရည် ဆိုင်မှာ စားလို.ရတဲ့ မုန်.တွေ အပြင်၊ ထမင်းနဲ. ဟင်း တွေပါ ရောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ အသုတ်စုံ နဲ. မြန်မာရိုးရာ အစားအသောက် အစုံရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ထမင်းသုတ်နဲ. လက်ဖက်ထမင်းစားခဲ့ပါတယ်။
at 10/02/2016 06:42:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Food, Mandalay, Myanmar, Myanmar Food, Yangon